ब्वाइफ्रेण्ड फिल्म अहिलेको परिस्थितिको सेरोफेरोमा केन्द्रित चलचित्र ः मदन घिमिरे | www.aagopati.com Websoft University
ब्वाइफ्रेण्ड फिल्म अहिलेको परिस्थितिको सेरोफेरोमा केन्द्रित चलचित्र ः मदन घिमिरे
नेपाली सिने जगतमा अग्रिम स्थानमा आउने नाम हो निर्देशक मदन घिमिरे । नेपाली चलचित्रको व्यापार धरासाही अवस्थामा माया नमार जस्तो सफल चलचित्र निमार्ण गरेका थिए । मदन घिमिरेको २५ औं चलचित्र ब्वाईफेण्ड हालै सम्पुर्णकार्य सकिएर प्रदर्शनका लागी तयार भएको छ । यसै विषयमा भोला अधिकारीद्धारा गरिएको कुराकानी
१. ब्वाईफ्रेण्ड कस्तो खाल्को चलचित्र हो ?
ब्वाइफ्रेण्ड फिल्म अहिलेको परिस्थितिको सेरोफेरोमा केन्द्रित चलचित्र हो । बाउ आमा छोरा छोरीलाई स्कुल ,कलेज पठाउछन् । आफुहरु पैसा कमाउन व्यस्त रहन्छन् । छोरा छोरीहरु स्कुल ,कलेज जाने निउमा गलफ्रेण्ड ,ब्वाईफ्रेण्ड भएर घुम्न जाने गरेका भेटिन्छन् । बाउ आमा छोरा छोरीलाई पैसा दिएर हुन्छ कि स्कुटर,बाइक किनि दिएर छिमेकीको भन्दा स्टेन्डर बनाउन चाहान्छन जुन देखासिखीको बारेमा चलचित्रले देखाउन खोजेको छ । यो उनिहरुको प्रेम क्षणिक होईन लङलास्टिङ हुनु पर्छ भन्ने शन्देश दिन चलचित्रले खोजेको छ ।
२. आजभोली थिएटरका कलाकार फिल्ममा चलेका छन्, हजुर को फिल्ममा के छ ?
थिएटरमा एउटा नाटक २,२ः३० मिनेट कथामाको परिधिमा घुमेको हुन्छ ।तर चलचित्रमा कलाकारलाई सजिलो छ । थोरै डाइलोक कण्ठ गरे पुग्छ । मेरो बचल।चित्रमा पनि थिएटरका कलाकार राखेको छु । भर्खरै मण्डला थिएटरमा दुर्भषा नाटकमा प्रस्तुत हुनु भएका कलाकार सरोज खनाल मेरो चलचित्र ब्वाईफ्रेण्डमा हुनुहुन्छ । साथै केहि कलाकार थिएटरका पनि लिएको छु ।
३ . ब्वाइफ्रेण्ड चलचित्र चल्छ भन्नेमा मदन घिमिरे कतिको विस्वस्त हुनुहुन्छ ?
मेरा चलचित्र अधिकांश व्यवसाहिक हिसावले चलेका छन् । म समय अनुसारको फिल्म बनााउने गर्छु । यो चलचित्र मेरो २५आौं चलचित्र हो । माया नमार जस्तो सुपरहिट चलचित्र बबनाएको छु जुन अडियोले मात्रै लगानी सुरक्षित गरेको थियो । त्यस्तै दादा गिरी,फैसला ,बुवा आमा एक्सन चलचित्रले सर्वाधिक व्यापार गरेका चलचित्र हुन भने यो ब्वायफ्रेण्ड चलचित्रले पनि दर्शकको मन जित्छ भन्नेमा हामी सम्पुर्ण टिममा छ । २०५८ सालमा जतिखेर नेपालमा भुत्लाभुत्लि चल्थ्यो त्यतिखेर मेले माया नमार लभस्टोरी चलचित्र बनाएर अत्यधिक व्यसाहिक गरेको थियो । जस्को हुबहु चलचित्र भारतमा २०६०,६१ तिर “जन्नदे”“जन्नदे टु ” निर्माण भएका थियो । त्यस्तै माया बसेछ ,अकोृ मेरो सफल चलचित्र हो ।मैले राजेश हमाल ,रेखा थापा जस्ता कलाकार लिएर निर्माण गरेका चलचित्र हो जसले ५१ ीदन मनाउन सफछ ।
४ . तपाई गीतकारमा पनि चर्चामा हुनुहुन्छ नि हैन ?
ह्जुर,१०० भन्दा बढी चलचित्रमा गीत लेखेको छु । जुन अत्यधिक चर्चामा छन् । माया नमारको टाइटल गीत “के सोचेते जीन्दगीमा के के भयो आज,एकाएक आँधि चल्यो दिउँसै पर्याे रात ”उदित नारायण झा र साधना सरगमले लगाएका थिए ।त्यस्तै दोस्ती फिल्मको ,छुट्दैन,टुछ्दैन ,फुट्देन हाम्रो दोस्ती लगायत थुप्रै गीत छन् ।
५ .भावी योजना के छ ?
मेरो भावी योजना म चलचित्र नै हो । साहित्ल्यमा नि कलम चलादै आएको छु भने ,उपन्यासको खाका तयार पारेको छु । निकट भविष्यमा प्रकाशन गर्ने योजना छ ।
६ . ब्वाइफ्रेण्ड चलचित्र दर्शकले कहिले हेर्न पाउनेछन् ?
ब्वाइफ्रेण्डका बारेमा मिडियामा जुन चर्चामा आइरहेको छ । यस्को चर्चा हुदा हुदै धेरै ठाउँबाट च्यारिटी सोको लागी प्रस्ताव आइरहेको छ ।टिनेजहरुको स्टोरी भएकाले पनि यस्को माग बढेको हुन सक्छ । यहि फागुन १४ गते नारायणघाटको इन्द्रदेव चलचित्र हलमा च्यारिटी सो छ भने पोखरा,बुटवल लगाएत केहि कलेजमा च्यारिटी सो पछि हलमा लगाउने सोच बनाएका छौ । हामी दर्शकलाई यहि भन्छौ ।